တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မိုးတွေရွာတဲ့အခါ ...
မမေရဲ့.. အချိန် အပိုင်းအခြားအလိုက် မိုးအပေါ် ခံစားချက်တွေကို ၊ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ခံစားပြီး ၊ ပြန်သွားပါကြောင်းး) ။ အင်းလျားကန်မှာ မိုးရေထဲ ထိုင်ဖူးတယ် ဆိုတာလေး အားကျလိုက်တာ ။ ညီမလည်း အဲလို လုပ်ချင်တာ ။
အလုပ်က အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် မကောင်းတာနဲ့ ခုမှ လာဖတ်ဖြစ်တယ်...
မမေ ဒါမှမဟုတ် ကိုကြီးလက်ချက်တော့ မိတော့မယ်လို့...ဟီဟီ...
am I suppose to write about rain?? Sure i will there are plenty of thing i should write about when raining..:P let me install my own internet at new home. i be back to net soon.... c ya all
ma may where is ko sayy..i think he is busy lol..wakkaka.dont disturb him , or else he wont have time to write huh..hehhe
အဲလို စုံစုံလင်လင်ချစ်စရာကောင်းအောင် ရေးနိုင်ပါ့မလားမသိ။
ဒါမဲ့ ရေးမယ်..၂ရက်လောက်တော့ စောင့်နော်..
ခွက်ထဲကို မိုးရေကျတဲ့အသံက တဖောက်ဖောက်မြည်သလိုပဲ… ပလောက်ပလောက်လို့ မြည်တယ်လား။ :P
အဟဲ… ရန်စကြည့်တာပါ။ ကျနော့်ဆီမှာတော့ အခုအချိန်က နွေဆိုတော့ မိုးအကြောင်းရေးရင်တောင် မြန်မာပြည်တုန်းက မိုးကိုပဲ ပြန်မြင်ယောင်ရေးရမယ်ထင်တာပဲ။ အတိတ်(၃) အပေါ်က ပုံက မိုးစက်တွေနေရာမှာ လူရုပ်လေးတွေလို့ မြင်မိတယ်။ တခြားအဓိပ္ပာယ်တခုခု ရှိမလားဘဲ။ မမေက ရေးထားတယ် မိုးတွေရွာတဲ့အခါ ပျော်မယ်၊ ပျင်းမယ်၊ လွမ်းမယ်၊ စိတ်ညစ်တယ်တဲ့။ ကျနော်က တခုထပ်ဖြည့်မယ်ဗျာ။ တချို့ကလဲ မရွာနိုင်တဲ့ မိုးကို မျှော်ကြတယ်ဗျ။ :)
6/19/2007 12:22 AM
" လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းတွေနဲ့ ပေါ့ကျတခွက် ရေနွေးတအိုး … မိုးသံတဖြောက်ဖြောက်နဲ့ ထိုင်သောက်ခဲ့ဖူးတယ် "
အဲဒီလို အရသာမျိုးက အရမ်းရခဲတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလို လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ မိုးစက်တွေတွေကို ငေးကြည့်ပြီး အတွေးနယ်ချဲ့စဉ်းစားတိုင်း ဆေးလိပ်ကိုပါ သောက်နေမိခဲ့တယ်။ မကောင်းမှန်းလည်း သိပါတယ် .. ဒါပေမဲ့လည်း ...
6/19/2007 8:54 PM